Niainga avy tao amin`ireo trano hazo ny afo ary niampita tamin`ireo trano biriky nanodidina. Vokany, olona iray no namoy ny ainy, trano manodidina ny 25 tafo no may kilan’ny afo ary olona 114 kosa no tsy manan-kialofana rava fananana. Nisy fahatarana moa ny fahatongavan`ny sampana mpamonjy voina noho ny fahataran`ny antso voarain`izy ireo ka ireo mponina teo amin`ny manodidina no nifandrimbona tamin`ny famonoana ny afo mandra-pahatonga azy ireo. Somary nananosarotra ihany koa ny famonoana ny afo raha ny nambaran`ireo mponina satria lavitry ny toerana nitrangan'ny loza ny arabe izay nisy ny rano ary saika nahitana fahasimbana avokoa ny fitaovana nampiasain`ireo mpamonjy voina. Hatreto dia tsy fantatra ny nahatonga ny firehetana ary misokatra ny fanadihadiana.